Ny tranofiara voalohany amin'ny andiany Fizika dia misy | Avy amin'ny mac aho
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia nandefa tao amin'ny fantsona YouTube ny tranofiara voalohany amin'ny andiany manaraka izay hanomboka amin'ny Apple TV +. Miresaka aho Ara-batana, andiany iray misy ny mpilalao sarimihetsika Rose Byrne izay mitana ny andraikitry ny vehivavy mpikarakara tokantrano 80s mijaly sy mponina ao San Diego izay tratry ny filan'ny aerobika nandritra ny folo taona rehefa niady tamina fifandirana nandritra ny dia lavitra izy. Hanomboka amin'ny 18 Jiona amin'ny Apple TV + ity andiany ity.
Ny fizika dia noforonin'i Annie Weisman, fantatra tamin'ny asany taloha tamin'ny andiany Zazalahy lehibe (momba ny zazalahy), tsy mety amin'ny toerany (Suburgatory), mahatsiaro ho ratsy fanahy sy mamoy fo aho.
Ao amin'ny adiresy hitantsika I. Tonya, Liza Johnson ary Stephanie Laing. Ny ara-batana dia nofaritana ho komity maizina antsasak'adiny natsangana tao San Diego 80 ary manaraka an'i Sheila Rubin, vehivavy mpikarakara tokantrano nampijaliana.
Mba hialana amin'ny haizina natokan'ny fiainany taorian'ny nanambadiany dia manao fanatanjahan-tena izy, saingy tsy navotsotra tanteraka raha tsy hitany fomba iray hampielezana ny fitiavanao vao manomboka manao fanatanjahan-tena miaraka amin'ny haitao miharo videotape hanomboka orinasa revolisionera ho lasa mpampianatra fomba fiainam-behivavy tamin'izany fotoana izany.
Famoahana ho avy ao amin'ny Apple TV +
Alohan'ny premiere amin'ity andiany vaovao ity, Apple dia kasaina halefa ny sarimihetsika Ny morontsiraka amin'ny 30 aprily, vanim-potoana faharoa amin'ny andiany Fikarohana Mythic amin'ny 7 Mey, vanim-potoana faharoa amin'ny andiany Tsingerina amin'ny 14 Mey, ny andiany Tantaran'i Lisey amin'ny 4 Jona sy ny vanim-potoana faharoa amin'ny andiany Trano alohan'ny maizina 11 Jona. Ny 23 Jolay dia havoaka ny vanim-potoana faharoa amin'ny andiany Ted Lasso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny tranofiara voalohany amin'ny andiany Fizika dia misy izao
Ny valim-bolan'ny Apple amin'ny telovolana faha-2021: 28 aprily.